YCDC to Open Restaurants in Yangon Parks | Myanmar Business Today
HomeBusinessLocalYCDC to Open Restaurants in Yangon Parks
YCDC to Open Restaurants in Yangon Parks
The Yangon City Development Committee (YCC) is preparing to open restaurants in the city’s parks and is now seeking approval for the plan, according to Yangon Mayor U Maung Maung Soe.
Once an approval has been secured, the committee will invite Expressions of Interest from prospective investors.
“We will build clean and hygienic restaurants in the parks to offer food at reasonable prices,” said the Mayor. “It will not be like street food, where hygiene cannot be assured.”
The YCDC manages 61 parks around the city, including 15 in the Eastern District, 19 in Western District, 14 in Southern District and 13 in Northern District.
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ(YCDC) လက်အောက်ရှိ အများပြည်သူအပန်းဖြေအနားယူသည့် ပန်းခြံများတွင် စားသောက်ဆိုင်များဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင်စိုးက ပြောသည်။
အဆိုပါကဲ့သို့ စားသောက်ဆိုင်များဖွင့်လှစ်ရန် စီမံချက်များရေးဆွဲပြီးဖြစ်ကာ အဆိုပါ စီမံချက်ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထံသို့ တင်ပြထားကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကေ်ာမတီမှ သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုချက်ရရှိပါက အမြန်ဆုံးလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုချက်ရရှိပါက စိတ်ဝင်စားမှုအဆိုပြုလွှာ (EOI) ခေါ်ယူပြီး တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ သိရသည။်
“ ပန်းခြံတွေထဲမှာ စနစ်တကျဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီးဈေးသက်သာပြီး သပ်သပ်ရပ်ရပ်စားနိုင်တဲ့ စနစ်တကျစားသောက်ဆိုင်လေးတွေကို လုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ လမ်းဘေးဈေးသည်တွေလို့မသန့်ရှင်းတဲ့ဆိုင်မျိုး မဟုတ်ဘဲ အဆင့်မြင့်ပုံစံမျိုးလုပ်ဆောင်သွားမှာပါ” ဦးမောင်မောင်စိုးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကေ်ာမတီလက်အောက်တွင် ပန်းခြံစုစုပေါင်း (၆၁) ခြံရှိပြီး အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တွင် ၁၅ ခု ၊ အနောက်ပိုင်းခရိုင်တွင် ၁၉ ခု ၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်တွင် ၁၄ ခု နှင့် မြောက်ပိုင်းခရိုင်တွင် ၁၃ ခု ထိရှိကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကေ်ာမတီ ပန်းဥယျာဉ်နှင့် အားကစားကွင်းများဌာနထံမှ သိရသည်။
Previous articleMyanmar Needs New Markets as GSP Withdrawal Looms
Next articleTanintharyi Region Poised for More Development